Tacsidii caaqil xaaji Cabdi cebeed :كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّ
Waxaa geeriyooday maalinta axada aheed Caaqilka Xaaji Cabdi cebeed oo ahaa caaqilka beesha Cabdala naaleye oo ku geeriyooday magalada ceerigaabo
waxaan oran lahaa samir iyo iimaan alaha kasiiyo ahaladiisa iyo qaraabadiisa iyo inta uu kadhintayba janada fardoosana alaha kawaraabiyo.
waxaa halkan tacsida kadiraya
cabdifataax cali xirsi
iyo dhamaan ahaladiisa ee kunool daafaha calamka
Shirkaddii labaad oo shidaal sahmintii Puntland joojisay kaddib amarka DFS
Horn Petroleum oo ah shirkad ka shaqeysa shidaalka iyo saliid baarista ayaa sheegtay in ay joojin doonto joogitaankeeda magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari.
Warkan ayaa lugu sheegay in shirkaddu ay iska deyn doonto kharashaadkii ay gelin jirtay howlo ay halkaas ka haysay, inta xal laga gaarayo khilaaf ku saabsan sharcinnimada qandaraasyada oggolaanaya saliidda ee u dhexeeya dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo maamulka Puntland.
Horn Petroleum waxa ay sheegtay in dowladda Puntland ka codsatay labo sano oo muddo kordhin ah, laga billaabo hadda in dib loo dhigo sahminta shidaalka, inta laga xallinayo caqabadaha siyaasadda.
Dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa dhowr mar shirkadaha shisheeye ee dalka ka wada howlaha shidaal iyo macdan-baarista ah uga digtay inay sii wadaan howlahaas, maadaama aysan oggolaanshiyo ka haysan dowladda dhexe ee dalka.
Dhawaan ayay ahayd markii agaasimaha hay’adda macdanta iyo shidaalka ee Puntland, Ciise Faarax Dhoollawaa uu sheegay in maamulka uu si madax-bannaan u baari doono shidaalka, si khayraadka dabiiciga ah looga faa’iideeyo bulshada.
Waa shirkaddii labaad ee joojisa shidaal sahminta Puntland muddo bil gudaheed ah, xilli ay muuqato in dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ay saameyn xooggan yeelatay.
Axmed Madoobe oo u hanjabay Odayaasha ka qeybgalaya Wajiga 2-aad ee Shirka Midnimo
Qaban qaabada Wajiga 2-aad ee Shirka Midnimo ayaa aad looga dareemayaa Gobolka Gedo, gaar ahaan Degmada Garbahaareey, waxaana magaaladaasi ku qul qulaya dad badan oo doonaya Shirkaan in ay ka qeyb galaan.
Injineer Xasan Maxamed Faarax Coon-gaab, oo kamid ah Wafdi Shalay gaarey Garbahaarey ayaa warbaahinta u xaqiijiyay in Maalmaha soo socda uu ka furmayo Magaalada Wajiga 2-aad ee Shirka Midnimo oo looga hadlayo Aayaha Jubbooyinka iyo Gedo.
“Odayaasha iyo Qeybaha kala duwan ee Bulshada Jubbooyinka iyo Gedo ayaa soo gaaraya Garbahaarey, oo hadda lagu diyaarinayo Wajiga Labaad ee Shirka Midnimo, oo loogu hadlayo xalinta Khilaafaadka iyo Dhismaha Maamul loo dhan yahay,” ayuu yiri Coon-Gaab.
Wuxuu sheegay in Axmed Madoobe Maamulkiisa hadda ka billaabay Jubbooyinka inuu Odayaasha ugu caga-jugleeyo Dil ama xariga haddii ay aadaan Shirka Midnimo ee Garbahaarey.
Axmed Madoobe oo ku howlan soo xulista Baarlamaanka Maamulkiisa ayaa u arkay Shirka ka furmaya Garbahaarey mid dhabarjebin kara Howshiisa, sidaasi darteedna wuxuu fariinga casbi gelin ah u diray Odayaal dhaqameedka Hubbooyinka.
Shacabka Gobolka Gedo ayaan wali si rasmi ah u shaacin Go’aankooda ah Maamulka ay kamid noqonayaan, waxaana arintaasi ay tahay ajandaha ugu weyn Shirka furmaya ee Midnimo Labo ee Garbahaare.
Xassan sheekh oo ka hadlay arrin muhiim ah oo mudo lagu eedeynaayay DF
Madaxweynaha Jamhuuriyada Federaalka ah ee Somalia Xassan Sheekh Maxamuud, ayaa waxa uu ka hadlay wararka la xiriira isdaba-marinta Hantida Qaranka.
Waxa uu sheegay inay dowladu ay si buuxda ula dagaalami doonto musuqa lagu eedeynaayo, waxa uuna meesha ka saaray inuu wax kala socdo talaabooyinka musuqa ee lagu eedeynaayo Hay’adaha dowlada iyo shaqsiyaadka farakutiriska ah.
Madaxweynaha ayaa xusay inay hadda dhisan yihiin hay’ado awood u leh xakamaynta musuq-maasuqa, balse cilada ugu weyn ay tahay in si joogto ah loola socdo qaabka ay u dhacdo Musuqa.
Xasan Sheekh Maxamuud ayaa tilmaamay in caddaaladda la hor geynayo cid kasta oo lagu helo musuq-maasuq iyo wax is-dabamarin.
Marar kala duwan oo hore ayaa musuq-maasuq lagu eedeeyay hay’ado ka tirsan dowladda federaalka ah ee Soomaaliya.
Ra’iisul Wasaare Cumar Oo Ka Digay Arin Halis Ah
Ra’iisal Wasaaraha Xukuumada Federaalka Somaliya Cumar C/rashiid Cali Sharmaarke, ayaa ku tilmamay dagaalada Magaalada Guriceel ee Gobolka Galgaduud, kuwa nasiib daro ah, isla-markaan ay fursad siin karaan Shabaab, markale in ay is abaabulaan, ka faa’iideystaan dagaalada micno darada ah.
Ra’iisal Wasaaraha, ayaa cambaarayn dusha uga tuuray kooxaha caadaystay in shacabka dhaxdiisa ku dhex dagaalamaan, iyadoo xilligaan shacabka Somaliyeed iyo dowladuba heegan loogu jiraan, sidii nabadiidka looga sifayn lahaa goobaha ay gacanta ku hayaan.
“Waan ka xunahay dagaalada micno la’aanta ah ee ka socda Magaalada Guriceel, Xukuumaddu waxay ugu baaqaysaa dhinacyada dagaalku u dhexeeyo in si shuruud la’aan ah dagaalka ku joojiyaan.” Ayuu Ra’iisal Wasaaruhu ku sheegay War Saxaafadeed laga soo saaray Xafiiskiisa.
“Waxaan mar labaad ku baaqayaa in la joojiyo dagaalada ay ku dhimanayaan muwaadiniinta Somaliyed, Waxaana xisuusinayaa dhinacyada dirirtu ka dhaxeyso in Somaliya, ay maanta mareyso marxalad cusub oo ku salaysan nabad iyo wadatashi, taas oo looga soo gudbay xilligii colaadaha, ayna hiigsaneyso mustaqbal wanaagsan iyo horumar.” Ayuu yiri Ra’iisal Wasaare Sharmaarke.
Ra’iisal Wasaaraha, ayaa sheegay in Xukuumaddu baaritaan ku samayn doono, cidii ka dambeysay dagaalka lagulana xisaabtami doono cid weliba oo dagaalkaas lug ku yeelata.
Muuqaal cusub 2015: Muqdisho nolol & dib u soo kabasho dhab ah‏ (Daawo)
Haddii aad muddo dheer qurbaha ku ahayd dareen ku joog, ma ku noqotay dalkaada, mase soo booqatay Xamar? Waxaa kuu muuqanaya marka dhinac kasta la fiiriyo ammaan iyo horumar degdeg ah. Waxaa la arkayaa dib u dhis iyo gaar ahaan Muqdishoow oo si xowli ah, mucjiso ah u soo kabanaysa.
Ummad kasta iyaga ayaa aayahooda hormarsata, waxaase lagama maarmaan ah in la helo kalsooni ku timaadda isku tashi iyo iskaashi dhexmara shacab iyo dowlad. Nabagelyada oo ah isha ugu muhiimsan ee horumarka aadamiga ayaa u baahan in si buuxda gacanta loogu dhigo, sharci iyo kala dambeyna si wada jir ah loo soo wada celiyo.
Muqdishoow taariikh ahaan iyo maqaam ahaanba waxay qeyb muhiim ah ka tahey taariikhda iyo xadaarada Somalia, midda Bariga iyo Geeska Afrika, Soomaaliyana kama jiraan magaalo ama deegaan la mid ah ama la barbardhigi karo xamar xag baaxad, tirada dadka, ganacsiga, bilicda iyo casrinimada intaba.
Sumcaddii iyo bilicdii Muqdisho ayaa dib u soo noolaanaysa. Waxaa ku soo qulqulaya dadkeedii oo ka kala imaanaayaan dunida daafaheeda kala duwan. Laga ma sheekeyn karo nolosha iyo horumarka ka bilowday. Waxaa ka socda dib u dhis iyo dhaqan celin baaxad weyn leh. Nabadda iyo horumarka oo hadda laga dareemayo ayaa ah kuwo is-barbar-socda. Waxay soo jiidatay beesha caalamka iyo dunidii la’eed Somalia meel ay kasoo gasho si maalgashi iyo iskaashi ula sameeysato.
Hada waxaa horumar xowli ah ku socda dhisida amaanka iyo soo celinta qeybihii kala duwanaa ee adeegyada bulshada. bilicda Xamar ka bilaawatay waxay saameyn ku yeelatay isbadalka siyaasadeed ee dalka, waxaa laga gudbay marxaladii kala guurka, waxaa dhashay nidaam dalka oo dhan mideynaya iyo dowlad dastuuri ah.
Waxaa hubaal ah haddii Xamar ay dib u soo kabato in dalka oo dhanna dib u midoobaayo, lana arki doono amni, horumar iyo noloshii lagu yaqiinay Jamhuuriyadda Somalia oo qof kasta hoos harsado. Waxa hadda hey’ado badan oo caalami ah, sida laamihii Qaramada Midowbay, kuwa Midowga Europe iyo dowlado badan shaaca ka qaadeen inay xarumahooda dibloomaasiyadeed dib uga furanaayaan Muqdisho.
Xasan Sheekh wuxuu xaafadiisa ugu sheekeeyo Hargeysa wax kama gelin”
Maxamed Biixi Yoonis oo ah wasiirka arrimaha dibada Maamulka Somaliland ayaa ka jawaabay war kasoo yeeray Madaxweynaha Jamhuuriyada Federaalka ah ee Somalia Xasan Sheekh Maxamuud.
Wasiirka oo warbaahinta kula hadlay Magaalada Hargeysa ayaa sheegay in hadal waliba oo kasoo yeera DF Somalia gaar ahaan Madaxweyne Xasan Sheekh aysan u arag mid ka weecin doona go’aankooda Siyaasadeed.
Wuxuu sheegay Wasiirka inay haboon tahay in aan laysku mashquulin hadlada uu Xassan Sheekh Maamulka u marinaayo hawada ay noqdaan kuwo aan waxyeeleyn u geysaneynin qodobadii lagu heshiiyay Shirarkii ka kala dhacay Ankara iyo Jabuuti.
Nuqul kamid ah hadalka wasiir Biixi ayaa waxaa kamid ahaa “Xassan Sheekh wax uu xaafadihiisa ugu Sheekeyo wax anaga naga khuseeyaa ma jiraan xaqna wuu u leeyahay waxuu doono ayuu halkaas ka oran karaa ciduu la hadlayana waa dadkiisi anaga Somaliland baa nala yiraahdaa wadan gaar ah baanu nahay ee naga daay erayada aanu dhibsanay”
“Adeer Xamar hadii ay Tiraahdo Hargeysa iyo Somaliland ayaanu keenaynaa iyaga ayey u taala sida ay u keenayan iyaga ayaa yaqaana Hargaysa iyo Somaliland wax go lagu qaado ka weyn Somaliland waxaa ka go’an gooni isku taageeda, Somalia qadiyadeeda ha hormariso” ayuu yiri Maxamed Biixi Yoonis.
Waxa uu sheegay in dhowr jeer ay ka aamuseen hadalo garaafeynaaya Maamulka oo kasoo yeeray DF Somalia, waxa uuna Tilmaamay in taasi ay kala xisaabtami doonaan.
Ugu dambeyntii, waxa uu DF Somalia uga digay hadalada ku aadan Maamulka Somaliland oo ay kala tashaneyso Dowlada dariska la ah Somalia, kadib markii uu sheegay inay heleen Macluumaadyo.
Madaxweyne Xasan Sheekh Oo Fariin Muhiim ah u diray…
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, ayaa sheegay in wadatashiyada xaalada guud ee dalka Soomaaliya looga arinsanaayo ay noqon doonaan kuwa la ballaariyo oo cid waliba ay ka geybgasho oo Soomaali ah, lana joogteyn doono.
Xasan Sheekh Maxamuud oo Saxaafadda kula hadlay Magaalada Muqdisho, ayaa si dadban uga jawaabay eedeymo uga yimid Maamulka Galmudug oo ku aadan inaan laga qaybgalin shirka madaxda Maamul Goboleedyada dalka, ayaa sheegay in cid gaar ah aan danta Soomaali lagala tashaneyn oo Soomaali oo dhan lagala tashanaayo.
Madaxweynaha wuxuu tilmaamay in maamulada dalka ka jira ee aan dhameystirneyn kolka ay dhameystirmaan ay ka qaybgali doonaan shirarka wadatashiga Madaxda dalka iyo Maamul Goboleedyada.
“In laga wada shaqeeyo sidii uu dalkan caalamka ula tartami lahaa, isla markaana looga gudbi lahaa caqabad kasta oo ka hor imaan karta horumarka dalka, shirkan waa kii ugu horeeyay, waxaan rajeynayaa in shirarka labaad ay imaan doonan inta ka maqan, halka kan saddexaad uu noqon doono mid ay dhamaan ka wada soo qeyb galaan oo aan la dhihi doonin cid gaar ah ayaa ka maqan shirka”Ayuu yiri Madaxweynaha.
Madaxweynaha Soomaaliya oo hadalka siiwata ayaa yiri “Waxaan leeyahay tartanka dhexdeena ah inaan ka qaadno oo aan la tartan caalamka intiisa kale si aduunka aan wax ula qaybsano”
Shirkii udhaxeeyay Madaxda dalka Soomaaliya iyo Madaxda maamulada Gobolada dalka ee shalay Muqdisho ku soo dhamaaday, ayaan laga qaybgalin maamulka Galmudug, waxa ayna sheegeen masuuliyiinta maamulkaasi inay arintaasi tahay mid meel looga dhacay maamulkaasi iyo dadka Gobolada dhexe kasoo jeeda.
Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa doonaysa in dalka ay ka dhacdo doorasho xor ah, sidoo kalena Dastuurka Soomaaliya afti dadweyne loo qaado.
Maxaa looga hadlay shirkii u horeeyay ee golaha wasiirada cusub ee Somalia?
Golaha wasiirada cusub ee lagu dhawaaqay ayaa shirkoodii ugu horeeya maqribnimadii xalay ku yeeshay Xafiiska Ra’iisal wasaaraha ee magaalada Muqdisho. Shirkan oo uu ugu yeeray Ra’iisal wasaare Cumar C/rashiid ayay xaadireen inta badan Golaha wasiirada magacaaban oo Muqdisho ku sugan.
Qodobka ugu weyn ee shirka looga hadlay wuxuu ahaa Sidii kalsooni loogu raadin lahaa xukuumadda iyo Waqtiga ay Baarlamaanka hortegayaan si codka kalsoonida loogu qaado.
Xukuumadda cusub ayaa la filayaa inay Baarlamaanka hor tagto Axadda ama Isniinta si codka kalsoonida loogu qaado, iyadoo markan la filayo inay codkaasi hesho kadib markii xildhibaanno badan lagu soo daray xukuumada cusub oo u badan kutladii Badbaado Qaran iyo xildhibaanadii taageersanaa Madaxweynaha.
Ra’iisal wasaaraha ayaa xubnaha Golaha wasiirada cusub ka dalbaday inay bilaabaan howshii ololaha kalsooni raadinta kadibna ay shir kale isugu imaan doonaan markii ay hubsadaan inay heystaan codka kalsoonida kadibna ay hortegi doonaan Baarlamaanka.
Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa isna ka codsaday Baarlamaanka inay kalsooni siiyaan Golaha wasiirada cusub, wuxuuna sheegay in howlo badan laga sugayo xukuumada si loo gaaro hiigsiga cusub ee 2016, isla markaana shaqooyinkii hakadka galay loo dardar geliyo.
Daawo Sawirrada : Tababar aan caadi aheyn oo la siinayo booliiska SOMALIA
Saraakiisha Ciidamada Midowga Africa ee AMISOM ayaa waxa ay tababar dhanka xog u ruurinta ku saabsan u furtay Tiro ka tirsan Ciidamada Booliska Somalia.
Tirada Ciidamada ee Tababarkaasi loo furay ayaa la sheegay inay gaarayaan ilaa 50 askari oo ka tirsan ciidanka booliska Soomaaliyeed.
Ciidammadan tababarka qaadanaya waxaa la sheegay inay isagu jiraan boolis cusub iyo kuwo horay uga soo shaqeeyay gobollada dalka,Waxuuna u furmay tababarka Arbacadii lasoo dhaafay sida ay shaacisay AMISOM.
Sargaal sare oo u hadlay Ciidamada AMISOM gaar ahaa kuwa wada tababarada ayaa waxa uu yiri “Furitaanka tababarkan iyo qorista ciidamada waxaa goobjoog ka ahaa Col. C/rashiid Aadan oo ah taliyaha dugsiga tababarka booliiska Soomaaliya ee Jen. Kaahiye, waxaa kaloo goobta ku sugnaa saraakiil kale oo ka kala socday booliiska Soomaaliya iyo kuwa booliiska Midowga Afrika,”
Sidoo kale waxa uu Sargaalkaasi sheegay inay wadaan qorshe dib loogu dhisayo awooda ciidamka booliska Soomaaliyeed,Waxaana qorista ciidamada cusub ee booliiska Soomaaliya oo isugu jira rag iyo dumar qayb ka tahay horumarinta ciidamada Qaranka Soomaaliya.
Furitaanka tababarka iyo qorista ciidamada cusub ee booliiska Soomaaliya ayaa waxaa goobjoog ka ahaa saraakiisha booliiska AMISOM oo sheegay inay rajeynayaan in tababarkan uu ku dhammaado guul.
Dhanka kale, Tababarkaani ayaa la filayaa inuu socon doono muddo kooban iyadoona tiro kale loo bilaabi doono goortii uu usoo gabagaboobo.
Warbixin: Nolasha Al-Shabaab kaddib: Dagaalyahan hore oo sir badan bixiyey
Si la mid ah dhallinyaro kale oo badan oo xilligaa joogay, ayuu Mawliid Cali Warsame, oo hadda 28-jir ah, waxa lagu qanciyay in uu ku biiro al-Shabaab kadib markii ay askarta Itoobiya ay soo galeen Soomaaliya 2006-dii si ay taageero millatari u siyaan Dawaladdii Federaalka Ku-meel-gaarka Soomaaliya ee uu hoggaminayay Cabdullahi Yuusuf Axmed.
“Dhallinyaro badan ayaa doortay in ay la dagaallamaan,” ayuu yiri. “Dheerri-galin badan ayaa loo galay in lagu qanciyo dadweynaha in ay ku biiraan jihaadka lagula jiro askarta Itoobiya. Ugu dambayntii waxan goostay in aan ku biiro biloowgii 2008-dii.
Si kastaba ha ahaatee, Warsame ayaa markiiba ogaaday waxa lagu sheegay jihaadka ee ay al-Shabaab doonayso in uu ugu dagaallamo ay ku saleeysnaayeen asaas been ah. Wakhti ayay ku qaadatay, laakiin 2012-kii ayay kama dambeestii u suuragashay in uu ka soo baxsado kooxda oo uu isku dhiibo askarta dawladda.
Warsame, oo hadda ku nool kana shaqeeya magaalada Beled Xaawo ee gobolka Gedo ee Soomaaliya, ayaa sheegay in horumar wayn uu ku yimid noloshiisa tan iyo markii uu ka soo tagay al-Shabaab oo uu ku qanacsan yahay xaaladdiisa hadda.
Waraysigan khaaska ah, ayuu dagaalyahankan hore kaga sheekeeyey sababaha uu ugu biiray al-Shabaab, go’aankiisii isku dhiibidda dawladda Soomaaliya iyo farriinta uu u dirayo dadka wali ku hoos jira cadaadiska al-Shabaab.
Su’aal: Qaab noocee ah ayaad ula shaqayn jirtay al-Shabaab?
Mawlid Cali Warsame: Waxaan ahaa dagaalyahay. Inta badan waxaan ka qayb qaadan jiray dagaalada ka dhici jiray gobolka Gedo, iyada oo mararka qaarna la noo qaadi jiray Muqdisho iyo gobollada Baay iyo Hiiraan. Howsheennu waxa ay ahayd in aan waddada u galno oo aan dagaal ku qaadno ciidamada Itoobiya iyo kuwa dawladda Soomaaliya ee isaga kala gooshi jiray gobolada dalka.
Su’aal: Maxaad ugu biirtay al-Shabaab markii hore?
Warsame: Dhabtii, aniga markii hore waxaa la ii sheegay in jihaad aan galayno, taas ayaana igu dhalisay in aan qoriga qaato. Balse, markii dambe waxaan ogaaday in hadafka al-Shabaab aannu ehayn jihaad. Yoolkoodu waxa uu ahaa in ay dalka xukumaan, ama ay laayaan dadka ay u arkaan in ay kasoo hor jeedaan fikirkooda.
Layaab ayay igu noqotay markii amar lanagu siiyay in aan dilno ama nolosha ku dhibno qof walba oo aan la dhacsaneen siyaasadda al-Shabaab. Aad ayay u kala duwanaayeen diinta Islaamka iyo habka aan markaas annaga u dhaqaynnay. Marka taa waxa ay igu dhalisay in aan ka fakaro ka bixitaanka al-Shabaab.
Su’aal: Sidee uga baxsatay al-Shabaab ugu dambayntii?
Warsame: Waxan go’aansaday in aan baxasado 2010-kii, laakiin waqtigaas dalka intiisa badan xarakada ayaa ka talin jirtay, dawladdana awood badan ma leheeyn. Way igu adkaatay in aan u soo tallaabo dhankoda [dowladda], marka kooxda ayaan kamid ahaa illaa 2012-kii aan fursad u helay in aan isasoo dhiibo. Waxaana isku so dhiibay maamulka dowladda ee gobolka Gedo
Su’aal: Isa soo dhiibistaada kadib maxaa iska badalay noloshaada?
Warsame: Wallaahi, wax badan ayaa iska badalay. Waxaan samaystay nolol ay adkeyd xitaa in aan ku fakaro markii aan al-Shabaab ahaa. Xaas ayaan hadda leeyahay, caruurna waa ay ii joogtaaa. Ganacsina waan samaystay, noloshayda waxa ay bilaawday hab cusub oo ay raacdo oo ka duwan sidii aan ahaa markii aan al-Shabaab ahaa.
Su’aal: Maxaa farqi ah oo u dhaxeeya noloshaadi al-Shabaab iyo midda aad hadda ku nooshahay?
Warsame: Farqi wayn ayaa u dhaxeeyay. Nolol iyo geeri ayay kala yihiin.
Markii aan al-Shabaab ahaa mar walba waxaan ku fakari jiray sidii aan qof u dili lahaa, waqti walbana qori ayaan garabka ku sitay. Waxaana diyaar u ahaa in aan dhinto, ehelkayga iyo asxaabtayda waan ka go’doonsanaa. Laakiin hadda, waxaan maanka ku hayaa qoyskayga iyo sidii aan mustaqbalka caruurtayda u hagaajin lahaa.
[Intii aan la joogay al-Shabaab], mar walba duurka ayaan ku jiri jiray, waa ay yareyd in aan magaalo arko. Baadiyaha ayaan gaaf wareegi jiray. Ugu yaraan usbuuci shan jeer ayaan dagaal gali jiray. Dhagahaygu waxa ay qabatin ku ahaayeen dhawaqa rasaasta, dilkana caadi ayuu agtayda ka ahaa.
Laakiin hadda, bini’aadamnimada ayaan fahmay. Waxaa ogaaday qaladkii aan ku jiray shacabka Soomaaliyeedna cafis ayaan waydiistay.
Su’aal: Tan iyo intii aad isa soo dhiibtay wax dhaqan celin ah makuu sameeysay dawladdu?
Warsame: Maya, laakiin waxaan dhawr jeer ka qeyb galay muxaadarooyin ay qabteen culimada Soomaaliyed oo al-Shabaa laga dhaleecaynaayay laguna sheegaayay in ay ka been sheegeen diinta Islaamka. Dhabtiina waan ku qancay in ay been ahayd jihaadka ay sheegayeen.
Su’aal: Maxaa ka mid ahaa beenta ay al-Shabaab kaaga sheegtay Islaamka?
Warsame: Meel ay al-Shabaab diinta kaga run sheegeenba ma arag. Wax walba waa ay ka been sheegeen, qof walba oo caqli lahaana hadda al-Shabaab waa uu ka baxay. Waxaa ku haray dad quus ah iyo dhalinyaro la khalday oo aniga oo kale.
Su’aal: Hadda noloshaada waa sidee?
Warsame: Hadda waxan leeyahay dukan lagu iibiyo cunnada, waxna waan bartaa. Waxa aan ka fakaraayaa waa horumarinta dadkayga iyo dalkayga, halkii markii hore aan ka shaqeyn jiray duminta ehelkayga.
Su’aal: Sidee bay kuula dhaqmeen dadka Soomaaliyeed ee aad soo dhex-gashay markii aad ka soo baxday al-Shabaab?
Warsame: Dadka og in aan al-Shabaab kamid ahaan jiray waa ay yaryihiin, inta ogna wax dhibaato ah kuma qabo. Dhallinyaro badan oo aniga oo kale ah ayaa jirta oo al-Shabaab ahaan jirtay oo hadda dadka ku dhex nool oo la aqabalay.
Su’aal: Maxaad ugu baaqaysaa dadka al-Shabaab hadda kamid ah?
Warsame: Waxaan leeyahay ,waqtigii al-Shabaab waa uu dhamaaday hadda. Haddii aad dhaqaale ku raacdden, maanta al-Shabaab dhaqaalo ma hayaan oo dekedihi dhan gacantooda waa ay ka bexeen. Haddii caqliga la idinka xadayna, maanta culimada Soomaaliyeed waa ay cadeeeyeen khaladaadka iyo beenta ay diinta ka sheegayaan.
Dhalinyarada waxaan ugu baaqayaa in ay ka faa’idaystaan cfiska ay dawladda u fidisay, oo ay dadkooda soo dhex galaan, sideeydoo kalana ay ka shalaayaan kamid ahaashahooda ay maalin al-Shabaab kamid noqdeen.
MADAXWEYNE DR GAAS IYO QAAR KA MID AH MADAXDA MAAMUL GOBOLEEDYADA OO MUQDISHO KU WAJAHAN MAANTA.
Madaxweynaha Dowladda Puntland Dr C/weli Maxamed Cali Gaas iyo Madax kale oo ka socota Qaar ka mid ah Maamul Goboleedyada Federaalka Soomaaliya ayaa lagu wadaa inay Maanta Booqasho ku tagaan Magaalada Muqdisho ee Caasimadda Soomaaliya.
Ujeedka Safarkaas ayaa lagu sheegay inuu yahay Kulan dhexmari doono Madaxda Dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya iyo Madaxda Maamul Goboleedyada dalka ka jira sida, Puntland, Jubbaland iyo Koonfur Galbeed, sidoo kalena waxaa Muqdisho lagu wadaa inuu ka dhaco shir Beesha Caalamku soo qaban qaabisay oo ku saabsan sidii looga wada shaqayn lahaa ka miro dhalinta Hiigsiga New Deal-ka ee 2016.
Dhinaca kale Madaxweynaha Dowladda Puntland ayaa wararka aan ka helayno Madaxtooyada Puntland waxaa ay sheegayaan in Safarkiisa Muqdisho uu lee yahay wajiyo kale oo ay ka mid yihiin la tashi lagala samaynayo Dhismaha Xukuumadda Cusub ee Soomaaliya.
Madaxweynaha Maamulka Jubbaland Axmed Madoobe ayaa lagu wadaa isaguna inuu Kismaayo Muqdisho ka aado halka Madaxweynaha Koonfur Galbeed Shariif Xassan Sheekh Aadan uu shalayba sii tagay magaalada Muqdisho.
Ammaanka Magaalada Muqdisho gaar ahaan Goobaha Kulamada iyo Shirarku ay ka dhici doonaan si aad ah loo adkeeyay,waxaana Ciidamada Ammaanka lagu daadiyey Guud ahaan Waddooyinka Muhiimka ah ee magaalada Muqdisho, halka Maanta ay xirnaan doonaan Waddooyinka Makka Al-mukkarama iyo KM4.
Ugu dambayntii waxay noqonaysaa Markii labaad oo Madaxweynaha Dowladda Puntland uu safar ku tago Magaalada Muqdisho tan iyo markii Xilka Madaxweynaha Puntland loo doortay,isagoo sanadkii 2014 u tagay ka qaybgalkii aaskii AUN Ra’iisul Wasaarihii hore ee Soomaaliya C/risaaq Xaaji Xuseen.
XOG: FAARAX CABDIQAADIR OO ISKU DABA RIDAY QORSHIHII LOOGA TAQALUSI LAHAA CAYDIID ILKA-XANAF.
Wararka ayaa sheegaya in Madaxweyne Xasan iyo Faarax Sheekh Cabdulqaadir ay wadaan Qorsho ay xilka uga qaadayaan Garyaqaan Caydiid C/laahi Ilka Xanaf, Gudoomiyaha Maxkamadda Sare ee Dalka.
Shirqolka xilka looga qaadayo Ilka Xanaf ayaa la sheegayaa inuu wado Faarax C/qaadir oo taageero ka helaaya dhanka Madaxweyne Xassan Sheekh oo dhowr jeer ay kusoo laalaabatay arrintaani.
Arrintaani ayaa waxa ay daba soctaa buuqii ka dhashay Xil ka qaadistii lagu sameeyay Xeer ilaaliyihii hore ee Qaranka, waxaana hadda la diyaarinayaa dadaalkii xilka looga qaadi lahaa Garyaqaan Caydiid C/laahi Ilka Xanaf.
Ujeedka ayaa lagu sheegay mid ay Damu-Jadiid ku xoojinayso qabsashada xilalka ugu muhiimsan DF Somalia, maadaama leysaga daba yimid Wasiiradii badnaa oo ay ku lahaayen Golaha Wasiirada.
Si kastaba ha ahaate, arrintaani ayaa waxa ay kusoo aadeysaa xili maalinimadii shalay uu Ilka Xanaf sheegay in Boqolaal Muwaadiniin ah ay si maalaayacni ah ugu xiran yihiin Xabsiyada dalka, islamarkaana Wasaarada Cadaalada aysan war u heyn.